Mitarika ny hetsik’i India hanoherana ny fiovaovan’ny toetrandro ilay tanora mpikatroka mafana fo Licypriya Kangujam · Global Voices teny Malagasy
Mitarika ny hetsik'i India hanoherana ny fiovaovan'ny toetrandro ilay tanora mpikatroka mafana fo Licypriya Kangujam
Fampiroboroboana ny fahatongavantsaina sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny toetrandro.
Voadika ny 07 Desambra 2020 9:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 日本語, polski, Español, عربي, Ελληνικά, Français, English
I Licypriya Kangujam, niresaka tao amin'ny Loabary an-dasin'ireo Mpiaramiasa amin'ny UNESCO (atao isaky ny roa taona ao Luanda) tao Angola ny 20 Septambra 2019. Sary an'i Dilanlekamge avy ao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Roa andro talohan'ny nahatrarany ny fahasivy taonany, nandefa bitsika ilay mpiady ho an'ny toetrandro Licypriya Kangujam — izay manana mpanaraka maherin'ny 93,4K ao amin'ny Twitter, maherin'ny 20K ao amin'ny Facebook, ary maherin'ny 18,6K ao amin'ny fantsona YouTube-ny:
Manao antso avo amin'ny vahoaka rehetra ao Manipur, fanjakana nahaterahako, aho mba hamboly hazo iray avy amin'ny 2 Oktobra.
Raha misy olon'i Manipur 2,8 tapitrisa mamboly hazo 2,8 tapitrisa amin'io andro io dia hanampy hiady amin'ny krizin'ny toetrandro maneran-tany izany.
Mahazo valinteny tsara marobe. ??
Mampiasa ireo fantsona malaza ao amin'ny tambajotra sosialy ireo i Kangujam hiarovana ilay tolona ho an'ny fitsaràna ara-toetrandro, tsy ao India irery ihany, izay toerana niaviany, fa manerana izao tontolo izao. Vavolombelon'ny fanohanana azony tao anaty aterineto noho ny heviny ny valin'ny antsony :
— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) October 2, 2020 azzzzzz
Androany, fambolena hazo nataon'ny vondrompiarahamonina 4, dia ny Wabagai Kadajit, Wangkhei Ningthem Pukhri Mapal, Wabagai Mayai Leikai & Sangaiyumpham tapany 1 ho an'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahako.
Misaotra anareo rehetra.
Maro amin'ireo mpanaraka azy, toa an'i Nandini Dixit, mpitia voninkazo avy ao Chhattisgarh, no matetika mitondra lavitra ny hevitr'i Kangujam :
— Nandini Dixit (@Nandini72113762) September 28, 2020 zzzzzz
Firariana mialoha ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i licypriya
Ry zalahy, ndao hanaraka ity hetsika mitohy ity ary hamboly hazo iray amin'ny tsingerintaona nahaterahan'i @LicypriyaK ny 2 Oktobra, sy amin'ny tsingerintaona nahaterahan'ireo malalanareo rehetra ihany koa. Ohatra hoe ny 2 Oktobra koa izao ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny renibeko dia hamboly hazo betsaka kokoa aho izany amin'io andro io
Nanohana ilay tanora mpikatroka mahafana fo tamin'ny fomba azo tsapain-tànana kokoa ihany koa ry zareo. Ny 24 Septambra, ohatra, nanaraka an'i Kangujam ireo mpiady ho an'ny toetrandro raha — tsy nivadika tamin'ny toky nomeny tao amin'ny Twitter izy ka — nikasa ny hiditra tao amin'ny parlemanta Indianina tanatin'ny ezaka mba hanentanana ireo mpanao lalàna handany ireo volavolandalàna momba ny fiovaovan'ny toetrandro. Na dia tsy nahazo alalana hiditra aza ny vondrona dia nanao fihetsiketsehana am-pilaminana teo ivelan'ny tranoben'ny parlemanta ao Delhi, nahatonga olona maro hanamarika ny fisiany :
Maro ireo gazetim-paritra sy gazetim-pirenena mpivoaka isan'andro nandrakotra ny ezak'i Kangujam hampirotsaka ireo mpanao lalàna, ary nanonona azy ho nilaza fa mety handray anjara betsaka amin'ny fambolena fahatsiarovantena manoloana ny toetrandro ny lalàna mifehy ny famoahana etona karibaonina sy ny etona miteraka fihafanan'ny maripana.
Mpanohana mavitrika ny fampidirana ny fanabeazana momba ny fiovaovan'ny toetrandro any am-pianarana ihany koa i Kangujam, fidirana an-tsehatra notohananà mpikatroka mafana fo maro izay mino fa mety handaitra amin'ny fanenana ireo hetsika manimba ny tontolo iainana ny fambolena fahatsiarovantena momba ny toetrandro anatin'ny fahazazàna.
Teraka tao Manipur tao avaratra atsinanan'i India i Kangujam, ary ankehitriny dia mipetraka ao Noida, tanàna zanabolana akaiky an'i Delhi, ilay renivohitra. Efa tamin'ny fahenin-taonany izy no nirotsaka tanatin'ny ady manohitra ny fiovaovan'ny toetrandro ary tsy nilavo lefona hatreo. Nahatonga azy ho liana tamin'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fanatrehany ny Loabary an-dasin'ny Minisitera Aziatika momba ny Fanenana ny mety hisian'ny Loza Voajanahary tamin'ny volana Jolay 2018 ; nampirisika azy hirotsaka bebe kokoa anatin'ny fanavotana ny planeta ny traikefa azony tany.
Rehefa niverina avy tany amin'ilay loabary an-dasy izy dia nanangana ny Child Movement, hetsika iray mifototra ao India izay nikendry ny hanentana momba ny fiovaovan'ny toetrandro sy hiatrika ireo loza mba hiarovana ny hoavin'ny planeta.
Nanomboka teo, tsy tapaka ny fikarakarany famoriana tany amin'ireo faritra samihafa tao amin'ny firenena sy ny fandraisany anjara tanatin'ireo hetsika maneran-tany, izay nitsidihany firenena maherin'ny 30 hatreto. Niresaka tamin'ireo mpitarika izao tontolo izao mihitsy aza i Kangujam tao Madrid, Espaina, nandritra ilay Loabary an-dasin'ny Firenena Mikambana momba ny Fiovaovan'ny Toetrandro tamin'ny 2019.
Na dia “mpinamana akaiky” aza izy sy i Greta Thunberg, nandà an-kitsirano ireo fanoharana azy amin'ilay tanora Soedoazy mpikatroka mafana fo i Kangujam, aleony manefy ny maha-izy azy manokana. Tanatinà tafatafa niarahany tamin'ny WION News, nanazava izy fa:
Antsoin'ny olona hoe ‘Greta an'i India’ aho, fa ny tena marina dia ‘Licypriya an'i India’ no izy.
Noho ny faharatsian'ny kalitaon'ny rivotra ao Delhi sy ireo faritra manodidina azy dia nilaza i Kangujam fa nahatonga azy ho sahiran-tsaina bebe kokoa momba ny toetrandro nòho ny hatramin'izay ny fiainany ao Noida. Isaky ny ririnina, iharan'ny fanafihana tsy misy indrafo ataon'ny loto entin'ny rivotra avy amin'ny mololo may ny avokavoky ny mponina, miampy ireo setroka efa mihoampampana avy amin'ny ozinina sy ny fiara :
— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) September 29, 2020 zzzz
Tamin'ny 2019, nanao arotava tokana i India mba hiarovany tena amin'ny fahalotoan'ny rivotra.
Amin'ny 2020, mila manao arotava roa sosona i India mba hiarovany amin'ny fahalotoan'ny rivotra & ny COVID19.
Tanatin'ireo 9 volana lasa, nangina tanteraka & amin'izao nanomboka tao amin'ny tambajotra sosialy hiadiana amin'ny fahalotoan'ny rivotra.
Tsy misy hevitra intsony. Tara loatra.
Raha ny momba ny fiovaovan'ny toetrandro, tiany heken'ny maro ny olana misy ao amin'ny Ilabolantany Atsimo — anatin'izany i India, fa tsy ho very anatin'ny toedraharaha saro-bahana atrehan'ny ambin'izao tontolo izao. Nanazava ny hevitra hijoroany izy tanatinà resadresaka nataony tao amin'ny TEDxSBSC (Shaheed Bhagat Singh College ao Delhi) tamin'ny voalohandohan'ity taona ity :
Ireo ezak'i Licypriya Kangujam kely — raha tsy hanonona ny olona maro be mpanaraka azy ao amin'ny tambajotra sosialy — dia mampiseho fa tsy sanganehana ireo tanora manoloana ny olan'ny fiovaovan'ny toetrandro, ary maro ireo olona, anatin'ny sokajin-taona rehetra, momba io tolona io. Lafiny tsara maneho izany fa tsy very ny fanantenana ary mbola mety ho avotra ihany izao tontolo izao.
India 20 ora izay